Sida loo sameeyo laambad saliid leh liin dhanaan - Ikkaro
Inicio >> Imtixaanka guriga >> Sida looga sameeyo laambad saliid liin dhanaan
Tani waa wax saaxiibkay i baray waqti hore, Iyada oo kaliya liinta iyo saliid yar ayaan awoodnaa hel nalalka saliideed ee noo gaarka ah daqiiqado yar gudahood.
Waa run inaysan u adeegin inay na iftiimiso, laakiin waxay umuuqataa qurxinta habeenkii. Hadaad casho jacayl leedahay ama hadaad rabto muuji xiisaha cuntada ama cashada saaxiibbada ama qoyska.
Si loo sameeyo laambadeenna, waxaan kaliya u baahan doonnaa qalabka soo socda. Liin dhanaan iyo saliid yar, waan soo qaatay qaarna horay ayaa loogu isticmaali jiray karinta. Tani waa sida aan dib-u-warshadayno ;-)
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan maqaarka ka saarno orange u kala qaadaya 2 qaybood. Taas awgeed, waxaan ku calaamadeyneynaa mindi oo waxaan ku kala baxeynaa farta, fiidiyowga wuxuu u muuqdaa mid aad u fiican.
Qaybta sida aadka ah noo daneyneysa waa dabada, oo aan u isticmaali doonno sidii silsilad. Waa inaan si taxadar leh uga saarnaa qaybtan si uusan u jabin oo u lumin saliidda hadhow.
Tan waxaad ficil ahaan u tahay dhammeeyey laambaddii. Waa inaan saliid ku shubnaa gudaha si aan u hubinno in "silsiladdeenna" ay si wanaagsan ugu qooyayso saliidda.
Laakiin waxaad ku arki doontaa wax kasta oo aad u cad oo fiidiyowga ah. Hadaadan na raacin rukumo Waxaan rabaa inaan bilaabo soo dhejinta fiidiyowga toddobaadlaha ah
Halkan waxaan sidoo kale kaga tagayaa sawirro liin dhanaan ah. Loo adeegsaday sida shumac, laambad ama laambad
Sidee Loo Sameeyaa Rinjiyeynta Nylon Jaban
Lugaha hawo-la’aanta ama aan-qabad lahayn
Tabby. Samee gaarigaaga 'DIY Open Source'
9 faallooyin ku saabsan "Sida loo sameeyo laambad saliid leh liin macaan"
Febraayo 6, 2014 markay ahayd 7:53 pm
Aad u qabow!
Febraayo 12, 2014 markay ahayd 2:45 pm
Maarso 12, 2014 markay ahayd 2:57 am
waa fiicantahay waana wax dabiici ah
Maarso 15, 2014 markay ahayd 10:13 pm
ummm, laakiin taasi waa dhagarqabe, maahan ummm oranji ah
20-ka May, 2014 saacaddu markay tahay 8:09 pm
Fiican iyo udgoonka liintaas qaniga ah waa in la dareemaa
July 1, 2014 saacadu markay tahay 6:53 pm
Waxaa lagu samayn karaa dabocase…?
Ogosto 3, 2014 markay tahay 11:50 pm
hello, waxaan u arkaa inay yihiin kuwo aad u qabow, oo sahlan in lagu soo bandhigo mashruuc dugsi. Laakiin waxaan rabaa inaan ogaado haddii aan isticmaali karo nooc kale oo miro ah. Mahadsanid.
Ogosto 5, 2014 markay tahay 10:49 pm
Hagaag, runtii waxa kaliya ee liinta ka dhigaya mid muhiim ah ayaa ah inaan ka faa'iideysan karno dabada ku hartay sida silig. Ma aqaano in marka laga reebo liinta aad hayso midho kale oo leh astaamahan. Haddii aad mid isku daydo oo ay si fiican u shaqeyso, fadlan nala soo socodsii.
Ogast 8, 2015 at 12:50 am
Liinta liinku way wanaagsan tahay wax uma dhimayso nidaamka deegaanka